အရောင့်ရင့်မှတ်တမ်း – ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၇ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Editor's Notes » အရောင့်ရင့်မှတ်တမ်း – ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၇
အရောင့်ရင့်မှတ်တမ်း – ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၇
Posted by kai on Dec 8, 2017 in Editor's Notes, Myanmar Gazette | 17 comments
အေရာင့္ရင့္မွတ္တမ္း - ဒီဇင္ဘာ ၂၀၁၇
► Las Vegas မှာ Miss Universe ၂၀၁ရ ပြိုင်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့ Miss Universe Myanmar ဇွန်သံစဉ်။
► Los Angeles ရဲ့ Plus Three Band စင်တင်ဂီတည။
►San Francisco က YSE လူငယ်အဖွဲ့ရန်ပုံငွေ စင်တင်ဂီတပွဲတော်။
► မောင်စွမ်းရည်ရဲ့ အမျိုးသားနေ့ရောက်ပါပြီ ဆောင်းပါး။
► ဝင့်ပြုံးမြင့်ဘာသာပြန်တဲ့ The First Bishop of Rangoon
► မောင်မိုးညိုရဲ့ Insurance ဝယ်သင့်မဝယ်သင့် ဆောင်းပါး။
► U.S. ဖျော်ဖြေရေးခရီးလာတဲ့ ၃ထပ်ကွမ်းအကယ်ဒမီထွန်းအိန္ဒြာဗိုနဲ့ အမေးအဖြေ။
► ဒီဇင်ဘာအလှပန်း 2017 Miss Universe Myanmar ဇွန်သံစဉ်နဲ့အမေးအဖြေ။
► ပန်းသီးဗနီဂါရဲ့ အကျိုးအာနိသင်အကြောင်းဆောင်းပါး။
U.S. ပြည်နယ်အသီးသီးက ကထိန်ပွဲအလှူသတင်းများ။
လစဉ်ဖော်ပြနေက ျ ကဗျာ၊ ကာတွန်း၊ အင်္ဂလိပ်စာသင်္ခန်းစာ၊ ဗေဒင်ကဏ္ဍ၊ သုတ၊ ရသ၊ ကျန်းမာရေး၊ အိုင်တီနည်းပညာ ဆောင်းပါးစုံလင်စွာဖြင့် 2017 December လထုတ် မြန်မာ့ဂဇက် ထွက်နေပါပြီ။
မြန်မာဆိုင်များ၊ မြန်မာစားသောက်ဆိုင်များ၊ ဘုန်းကြီးကျောင်းများမှာ အခမဲ့ရယူပါ။
Myanmar Gazette Dec 2017
The Myanmar Gazette No. 108 Dec 2017 11″ x 17″ 32 Pages Printed in Los Angeles
Updated 12:45 PM ET, Thu December 7, 2017
(CNN) Almost 17 million infants worldwide are breathing toxic air, potentially affecting their brain development, according toaUNICEF report published Wednesday.
Putin, Erdogan agreed Trump’s Jerusalem decision bad for region: report
BY MAX GREENWOOD – 12/07/17 01:49 PM EST
Russian President Vladimir Putin and Turkish President Recep Tayyip Erdogan said inaphone call on Thursday that President Trump’s decision to recognize Jerusalem as Israel’s capital will undermine peace and stability in the region, according to Reuters.
“President Erdogan emphasized that the latest move by the U.S. government would negatively impact the peace and stability in the region. Russian President Putin stated he shared the same views,” sources in Erdogan’s office told the news agency.
Also on Thursday, Erdogan and Pope Francis agreed in another phone call that there should not be any changes to Jerusalem’s status, according to Reuters.
လူလိုသော်လည်း.. အိမ်အပြန်လမ်းမှ.. မကြိုနိုင်..။
Which American producers would suffer from ending NAFTA?
Feb 6th 2017by THE DATA TEAM
Texans would lose most from barriers to trade with Mexico
Scientists findaminiature version of our solar system, with eight planets andasun-like star
Democrat wins senate seat in Alabama for first time inaquarter …
The Times-Dec 12, 2017
လူအစ.. အာရှနဲ့ဩစီက… ဖြစ်ကြပြန်.။
The Conversation AU-Dec 7, 2017
New analyses of human fossils have pushed back our earliest recognisable modern ancestors to around 310,000 years. And they weren’t found in eastern or southern Africa (like previous fossil finds), but fromasite called Jebel Irhoud in Morocco. These findings have raised questions regarding exactly .
Birth Control Pills Still Linked to Breast Cancer, Study Finds – The New …
Dec 6, 2017 – Women who rely on birth control pills or contraceptive devices that release hormones faceasmall but significant increase in the risk for breast cancer, according toalarge study published on Wednesday. The study, which followed 1.8 million Danish women for more thanadecade, upends widely held …
US Military Testing Mind-Control Chips on Soldiers’ Brains to Alter Their Moods
Weird Science Medical Tech
Share on Facebook Share on Twitter Share on Instagram Share on Reddit Share on StumbleUpon
Matthew LoffhagenWednesday, 29 November 2017 – 10:16AM
Depression, PTSD, and anxiety attacks are all too common for soldiers in the line of duty. But what if we could change that as easily as flippingaswitch?
The incredible emotional strain caused by life-or-death combat can leave long-lasting mental scars, but scientists working with the military haveanew solution: They’re currently testing mind-controlling chips implanted in the brains of human soldiers to help improve their moods, reports the Nature academic journal.
While fairly invasive, inserting the AI-controlled computer chips into soldiers’ brains may provide relief to plenty of soldiers both past and present as they work through the challenges caused by their service.
“Unrelenting winds and parched weather turned everything in its path to tinder — including more than 700 homes.
“The fire in Ventura and Santa Barbara counties had scorched 273,400 acres, or about 427 square miles of coastal foothills and national forest, according to the California Department of Forestry and Fire Protection. That was 154 acres larger than California’s previous fire record holder — the 2003 Cedar fire in San Diego County that killed 15 people.
“The Cedar fire had been recognized as the biggest California wildfire in terms of acreage since 1932. Some fires before that date undoubtedly were larger but records are unreliable, according to state fire officials.”
သူကြီး သတင်းစာတောင် မဖတ်ဖြစ်တာ ကြာပြီ။ thintayeyeik@gmail.com ထဲကို ပို့ပေးလို့ ရမလား သူကြီးရေ။
အရင် ပို့ပေးနေတဲ့ alinsett.art@gmail.com အကောင့်က ဖွင့်ကို မဖွင့်ဖြစ်တော့လို့။ Pswd တောင် မေ့သွားပြီမို့။
UN ကို US ဘတ်ဂျက်ဖြတ်ပြီ
၁။ ဖြတ်ဖို့ဆိုရင် အချင်းချင်းဖြတ်စရာ ရှိအုံးမှပါ။ ဒီနှစ် ကုလသမဂ္ဂ ပုံမှန်လည်ပတ်နိုင်ဖို့ ထည့်ဝင်ငွေထဲက ၂၈၅ သန်းကို လျှော့ချဖို့ အမေရိကန်က ကျေညာလိုက်တယ်။
၂။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုက ၂၀၁၆ ခုနှစ်တုန်းက ကမ္ဘာအရပ်ရပ်ရှိ နိုင်ငံပေါင်း ၁၂၁ နိုင်ငံကို စီးပွားရေးနဲ့ စစ်ရေးအရ အကူအညီတွေ ပေးခဲ့ရာ ဒေါ်လာ ၂၁.၁ ထရီလီယံ ဖြစ်တယ်။ ဒေါ်လာသန်းပေါင်း 21,1000,000,000 ဆိုတာ နည်းတဲ့ ပိုက်ဆံတွေ မဟုတ်ပါ။
၃။ အဲ့ထဲမှာ အီရတ်အတွက် ဒေါ်လာ ၄.၃ ဘီလီယံ၊ အဖဂန်နစ္စတန် ၄.၂ ဘီလီယံ၊ အီဂျစ် ၁.၃ ဘီလီယံ၊ ဂျော်ဒန် ၁.၂ ဘီလီယံ၊ ပါကစ္စတန် ၉၈၈ သန်း အပါအဝင်ပေါ့။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကနေ အထောက်အပံ့တွေအများဆုံး ရရှိတဲ့ ဒီ (၅)နိုင်ငံလုံးဟာ မွတ်စလင်နိုင်ငံတွေ ဖြစ်တယ်လို့ Fox News က ကျေညာပါတယ်။ အများဆုံး (၁၀)နိုင်ငံကို ရေတွက်ခဲ့ရင်တောင် မွတ်စလင်မဟုတ်တဲ့ နိုင်ငံက ကင်ညာတစ်ခုပဲ ရှိပါတယ်။ ကညာကတော့ ခရစ်ယာန်အများဆုံးနိုင်ငံတစ်ခုပါ။
၄။ သမ္မတထရွမ့်က ဇဝေဇဝါးလုပ်သူ မဟုတ်ဘူး။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုက ဂျေရုစလင်ကို အစ္စရေးမြို့တော်အဖြစ် အသိအမှတ်ပြုကြောင်း ကျေညာတော့ ကုလသမဂ္ဂက မဲပေးပြီး ပယ်ဖျက်ခဲ့တယ်။ ကုလသမဂ္ဂရဲ့ ပယ်ဖျက်မှုကို အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုက ဗီတိုအာဏာ သုံးပြီး ဟန့်တားတယ်။ အမေရိကန်ကို ဆန့်ကျင်မဲပေးခဲ့လို့ ကုလသမဂ္ဂကို ထည့်ဝင်နေကျငွေတွေကို လျှော့ချမှာ ဖြစ်သလို အမေရိကန်နဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက်မဲပေးခဲ့တဲ့ နိုင်ငံတွေကိုလည်း အကူအညီအချို့ကို ဖြတ်တောက်သွားဖွယ် ရှိတယ်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဟာ ကုလသမဂ္ဂလည်ပတ်ဖို့ ၂၂ ရာခိုင်နှုန်း (ဒေါ်လာ ၃.၃ ဘီလီယံ)ကို ထည့်ဝင်ရလို့ အများဆုံး လှူဒါန်းနေတဲ့ နိုင်ငံ ဖြစ်တယ်။ ကုလငြိမ်းချမ်းရေးတပ်အတွက် ဒေါ်လာသန်း (၆၀၀)ကိုလည်း ဖြတ်တောက်အုံးမှာ ဖြစ်တယ်။ ဒါဟာ Peace keeping troop အတွက် ၂၈ ရာခိုင်နှုန်း ဖြစ်တယ်။
၅။ အမေရိကန်နိုင်ငံသားအချို့မှာလည်း ကုလသမဂ္ဂကို ဒီမှာ မထားဘဲ တရုတ် (သို့) ရုရှား၊ ဒါမှမဟုတ် ဂျီနီဗာလို နေရာမျိုးမှာ သွားထားဖို့ တိတ်တဆိတ် ပြောနေကြပြီဖြစ်တယ်။ ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ အမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ် နစ်ကီ ဟေလီက ＂ ကုလက အသုံးကြမ်းတယ်၊ အလုပ်လည်း မဖြစ်ဘူး＂လို့ ဝေဖန်ပါတယ်။
PRESIDENT TRUMP CUTS FUNDING TO U.N. AFTER ISRAEL VOTE
BY NICOLE GOODKIND ON 12/25/17 AT 4:08 PM
“The inefficiency and overspending of the United Nations are well known. We will no longer let the generosity of the American people be taken advantage of or remain unchecked,” Haley said inastatement announcing the cut to the U.N.’s overall $5.4-billion budget. “This historic reduction in spending—in addition to many other moves towardamore efficient and accountable U.N.—isabig step in the right direction.”
သတိသာဆက်ထားပါ..။ တရုတ်လို့အခေါ်..။ အမေရိကန်နိုင်ငံလို့အခေါ်..။
December 19 at 5:43am ·
“To strip their name from them – it’s dehumanising” – UN human rights chief on Aung San Suu Kyi’s refusal to use the term ‘Rohingya’.
24 Dec 2017 at 06:20 3,556 viewed6 comments
Gen Maung Maung Soe, who led the brutal crackdown this year on the Rohingya Muslim minority in Rakhine state, is one of 14 accused human rights abusers sanctioned last week by the United States. (Photo via VOA)
WASHINGTON: The Myanmar military, which has been accused of ethnic cleansing against the country’s Muslim Rohingya minority, has been invited back to the 2018 Cobra Gold war games in Thailand.
Lt Col Christopher Logan,aPentagon spokesman, said Thailand had invited Myanmar to take part in the annual Cobra Gold exercise, which involves thousands of US and Thai military personnel and participants from other Asian countries.
ထမင်းစားတိုင်း.. ၂ခွက်…။ သွားရေစာစားတိုင်း.. တခွက်…။ ပေါင်း.. တနေ့ ၈ခွက်..။
Updated 8:16 AM ET, Mon December 25, 2017
(CNN)It’s the end of December, which means there’sagood chance you are thinking of ways to live healthier in the new year. Whether you want to drop 10 pounds, improve your cholesterol or have more energy, we have five food-related New Year’s resolutions that will help you achieve your goals.
The looming retail apocalypse may be postponed in 2018
his year brought us no shortage of harbingers of the retail apocalypse. Mega-chains such as Toys “R” Us, Payless ShoeSource and H.H. Gregg filed for bankruptcy. The likes of Sears Holdings, Gap and Gymboree announced they were shutting hundreds of locations.
But as 2018 nears, retail is better positioned than it has been inalong time to resist impending doom
That’s partly because Republicans just passedagiant corporate tax cut that President Trump signed into law last week. There is arguably no policy goal for which retailers have fought harder in recent years, and the changes are sure to provideamajor boost to their balance sheets.
There are other upbeat signs, too, including that the industry appeared to be cruising to its best holiday season since before the Great Recession.